नेकपा विधान प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १५ समूह, १४ समूहले पाए टोलि नेता ! | Prabhavkari News
नेकपा विधान प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १५ समूह, १४ समूहले पाए टोलि नेता !
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समिति बैठकमा बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको छ। बुधबार उद्घाटन शत्रमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि बिहीबारबाट समूहगत छलफल सुरु भएको हो।
छलफलका लागि १५ समूह विभाजन गरिएको छ। अहिलेसम्म १४ समूहले टोली नेता पाएका छन्। १० नम्बर समूहमा भने नेतृत्व विवाद हुँदा टोली नेता चयन हुन सकेको छैन। टोली नेता चयन नभए पनि छलफल भने सबै समूहले सुरु गरेका छन्। महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, युवराज चौलागाईं, माधव सापकोटा, युवराज दुलाललगायतका नेता सहभागी १० नम्बर समूहमा नेतृत्वमा कुारा नमिलेको हो।
अन्य १४ समूहले भने टोली नेता र उपनेता पाएका छन्। उर्मिला अर्याल, कमला रोका, खिमलाल भट्टराई, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, दिनानाथ शर्मा, पूर्णकुमारी सुवेदी, विन्दा पाण्डे, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, रेणु दाहाल, लेखनाथ न्यौपाने, राम कार्की र हिमाल शर्मा टोली नेता चयन भएका छन्।
समूह १ मा दुईजना टोली नेता बनेका छन्। उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेललाई नेता बनाइएको हो। समूह २ मा कमला रोकाले नेतृत्व पाएकी छन्। उनको सहूहमा कृष्णध्वज खड्का र कृष्ण राई उपनेता बनेका छन्।
समूह ३ मा खिमलाल भट्टराई नेता बनेका छन् भने समूह चारमा जगन्नाथ खतिवडा टोली नेता बनेका छन्। त्यसैगरी समूह पाँचमा ठाकुर गैरे टोली नेता बनेका छन्। समूह ६ मा दिनानाथ शर्मा टोली नेता बनेका छन् भने उनको समूहमा देवेन्द्र दहाल, देवी खड्का, देवी ज्ञवालीलगायत नेता छन्।
समूह ७ मा पुर्णकुमारी सुवेदी टोली नेता बनेकी छन् भने निरज आचार्य उपनेता बनेका छन्। समूह ८ मा विन्दा पाण्डे टोली नेता बनेकी छन् भने बलराम बास्कोटा उपनेता बनेका छन्।
समूह ९ मा भगवती चौधरी नेता र भाष्कर काफ्ले उपनेता बनेका छन्। समूह ११ मा राजेन्द्र राई नेता बनेका छन्। समूह १२ मा रेणु दाहाल नेता बनेकी छन् । उनको समूहमा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, रेखा शर्मा, रामदीप आचार्य र लक्ष्मण पौडेललगायत नेता छन्।
समूह १३ मा लेखनाथ न्यौपाने नेता र सावित्रा भुसाल उपनेता छन्। १४ नम्बर समूहमा राम कार्की नेता बनेका छन् भने शिवमाया तुम्बाहाङफे उपनेता बनेकी छन्। १५ नम्बरमा हिमाल शर्मा टोली नेता बनेका छन् भने सावित्रा भुसाल उपनेता बनेकी छन्।
समूहगत छलफलमा एमसीसीको विरोध भएको छ। सरकारको कामको विषयमासमेत समूहमा छलफल भएको छ। छलफलको निष्कर्ष टोली नेताले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्।